हिराले ल्याईन आफ्नै कथामा उपन्यास ‘हिरा रत्न’ , Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
हिराले ल्याईन आफ्नै कथामा उपन्यास ‘हिरा रत्न’
डिसी नेपाल , १६ जेठ २०७६
काठमाडौं । हिरादेबी तन्डुकार पेशाले लेखक हैनन् । तर उनीहरु प्रेमका असिम अनुभवहरु छन् । उनले जहिले रत्नबहादुर तन्डुकारलाई भेटिन् । त्यहिलेदेखि उनीहरुको प्रेम सम्बन्ध जोडियो । उनीहरुले संसारलाई विर्सेर एकले अर्कालाई अपार मायाँ गर्थे ।
जो पहिले मरेपनि बाँचेकाले आफ्नो देहत्याग गर्ने कसम खान्थे । उनीहरु एक अर्का बिना बाँच्नै सक्दैन थिए । त्यसैले आफुहरुलाई चिनाउने क्रममा उनीहरुले हिरारत्न भन्थे ।
समयको खेल आधा दशक अघि रत्नबहादुर बिते । तर समाजले हिरालाई सति जान दिएन । अन्तत आफुले अथाह मायाँ गरेको श्रीमानलाई दिनदिनै सम्झेर हिराले समय बिताईन् । आफुहरुको असिम प्रेमलाई उनले पुस्तकमा उनीन र त्यो जवनपरक उपन्यासको नाम दिईन,‘हिरा रत्न’
हिरारत्न चलचित्र मन्दिरकी निर्देशक हिरादेबी तन्डुकारले नयाँ उपन्यास ‘हीरा–रत्न’ सृजनाको कथा हो यो । यो उपन्यास उनले पाठकमाझ ल्याएकी छिन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री एवम् गीतकार शँकरप्रसाद (एसपी) कोईराला, घोष्ट राईटिङका अध्यक्ष कमल ढकाल र लेखक हिरादेबी आफैंले काठमाडौंमा एक समारोहबीच बुधबार यो उपन्यास बिमोचन गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै उपन्यासकार हिरादेवीले भनिन्,‘हामी एक अर्कालाई असिम मायाँ गथ्र्यौ र पहिला म बिते भने उहाँ पनि आत्महत्य गर्छु भन्नु हुन्थ्यो । तर दैवको खेल, उहाँ पहिला बित्नु भयो र मैले उहाँको चाहना पुरा गर्दै गएकी छु ।’ उनले अगाडि थपिन्,‘हामी दुईको प्रेम पनि उदाहरणीय भएको र हाम्रो प्रेमले अरुले पनि केही सिकुन भनेर हाम्रो प्रेम कथालाई उपन्यासको रुपमा ल्याएकी हुँ ।’
घोष्ट राईटिङ नेपालका अध्यक्ष कमल ढकालले हिरा र रत्नको प्रेम कथा मुनामदन भन्दा कम नभएको जिकिर गरे । आफुहरुको प्रेमकथालाई बास्तविक रुपमा उतारेर हिराले यो जीवनपरक उपत्यास ल्याएको पनि ढकालले बताए । आफुहरुले व्यक्तित्व प्रकाश गर्दै आएकोमा हिरा र रत्नको प्रेम कथा र जीवन संघर्ष पनि त्यतिकै रोचक भएकाले यो पुस्तक प्रकाशन गरिएको बताए ।
कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री एसपी कोईरालाले रत्नबहादुर तन्डुकार अत्यन्त परिश्रमिक व्यक्ति भएका स्मरण गरे । आधा दशकअघि दिवँगत भएका तन्डुकारलाई यो पुस्तकले युगौंसम्म जिवित राख्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । सिनेमा हल खोजेर चलचित्रको विकाशमा योगदान पु¥याएका रत्नबहादुरले नेपालीको जलबिधुत परियोजनामा पनि लगानी गरेर जलबिधुतको बिकाशमा योगदान दिएको पनि कोईरालाले प्रकाश पारे ।
हिरा रत्न हलको उद्घाटन समारोहमा आफुले चिनेको रत्नबहादुर तन्डुकार अत्यन्त सरल व्यक्तित्व धनि भएको पत्रकार डब्बु क्षेत्रीले बताए । यो उपन्यासलाई पत्रकार क्षत्रीले अर्को मुना मदनको उपमा दिए ।
३५० रुपैयाँ मूल्या राखिएको यो उपन्यास १७८ पृष्ठको रहेको छ । यसलाई घोष्ट राईटिङ नेपालले प्रकाशन गरेको हो ।
विवादास्पद स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विषय वेमौसमी बाजा हो : प्रधानमन्त्री